किन झम्टिन्छन् सिगल चरा ?- विश्व - कान्तिपुर समाचार
किन झम्टिन्छन् सिगल चरा ?
श्रावण ९, २०७६ एजेन्सीहरू
काठमाडौँ — समुद्रको तटीय क्षेत्रमा पाइने सेतो चरा सिगल पछिल्लो समय आक्रामक बन्दै गएको छ । उसले मानिस र साना जनावरलाई आक्रमण गर्न थालेको हो ।
बेलायतको अनलाइन ‘डेलिमेल’ का अनुसार सिगल चराले डोरसेटको लाइमस्थित रेजिस समुद्री तटमा गर्मीमा शीतलताको आनन्द लिइरहेकाहरूमाथि आक्रमण गरेको छ । बेलायतमा यो वर्ष अचाक्ली गर्मी महसुस गरिएको छ । बुधबार बेलायतको तापक्रम ३६.११ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ ।
भोलि (बिहीबार) अझ उच्च तापक्रम ३८.८८ डिग्री सेल्सियस पुग्ने भविष्यवाणी बेलायतका मौसमविद्ले गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा शीतलताको खोजी गर्दै समुद्री तटमा चिसो हावाको आनन्द लिन सयौं मानिस तटमा पुग्ने गरेका छन् । तर, अब उक्त स्थान पनि असुरक्षित बन्दै गएको महसुस गरिन थालिएको छ । समुद्री तटमा पुग्नेहरूमाथि सिगल चराले आक्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ । चराविद्हरूका अनुसार यसको प्रमुख कारणमा मानिसले फाल्ने खाद्यपदार्थ, समुद्र किनारमा हुने बस्ती विस्तार र ध्वनि प्रदूषणलगायतका हुन् ।
एक आर्निथोलजिस्टले सिगलको बढ्दो आक्रामक व्यवहारको दोषी मानिस नै भएको बताए । ‘डेलिमेल’ का अनुसार हालै एक कुकुर मालिकले आफ्नो घरपालुवा जनावर ‘चिहुआहुआ’ (कुकुर प्रजाति) लाई सिगलले झम्टेर लगेको दाबी गरेका छन् । यसको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि भाइरल भएको बताइएको छ । आज लिइएको तस्बिरहरूमा डोरसेटको समुद्री तटमा आनन्द लिइरहेकाहरूमाथि सिगल चराले आक्रमण गरेको देखिएको छ । त्यहाँ हजारौं मानिस बढ्दो तापक्रममा शीतलताको आनन्द लिइरहेका थिए ।
३० वर्षयता चराबारे अध्ययन गर्दै आएका मार्टिन क्याडले भने, ‘मानिसले समुद्र किनारमा खाद्यजन्य फोहोर र चरालाई खुवाउन ती पदार्थ फाल्नुका कारण सिगल आक्रामक बनेको हो ।’ उनले यी कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘समुद्र किनारमा रहेका सहरहरूको विस्तारलाई हामीले प्रोत्साहित गरिरहेका छौं अनि दोष जति चरालाई दिइरहेका छौं । म भन्छु सिगल आक्रमण बन्नुको दोषी अरू होइनन् हामी नै हौं ।’
मार्टिनका अनुसार तिनीहरू समुद्र छेउमा रहेका चट्टानहरूमा प्रजनन् प्रक्रिया पूरा गर्छन् । ‘विगतमा त्यही गुँड बनाउँथे अनि समुद्रबाहिर निस्किन्थे,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय समुद्र किनारमा बस्ती विस्तार र मानिसको भीडभाड बढेकाले यो चराको बासस्थान संकटमा परेको छ । अझ त्यहाँ खाद्यपदार्थ त्यसै छाड्नु वा फाल्नुले सिगल चरालाई झनै आक्रामक बनाएको हुनुपर्छ ।’ सिगलमाथि सबै दोष थुपारिरहेका छौँ तर वास्तवमा त्यसो होइन ।
मानिसले समुद्र किनारमा खाद्यपदार्थ फ्याँक्नु प्रमुख कारण भएको मार्टिनको ठम्याइ छ । दक्षिणी इंग्ल्यान्डको समुद्री सहर वेमाउथ परिषद्का अधिकारीहरूले पटकपटक मानिसलाई सिगल चरालाई खुवाउन खाद्यपदार्थ नफाल्न आग्रह गर्दै आएका छन् । तर त्यसको बेवास्ता गर्दै चिप्सलगायतका खाद्यपदार्थ फ्याँक्ने गरिएका छन् । यसले त्यहाँको वातावरण प्रदूषित मात्रै भएका छैनन्, सिगललाई आक्रामकसमेत बनाइरहेको उनीहरूको ठम्याइ छ ।
‘दि गार्जियन अनलाइन’ का अनुसार सिगल बसोबास गर्ने क्षेत्रमा अनियन्त्रित रूपमा घर र बस्ती विस्तार भइरहेका छन् । ठुल्ठूला भवन निर्माणका कारण पहिलो उडान गर्न सिगललाई समस्या भइरहेको छ । ‘त्यसविरुद्ध लड्ने क्रममा सिगलहरू आक्रामक देखिएका हुन्,’ लामो समय सहरी सिगलबारे अध्ययन गर्दै आएका पिटर रोकले भने, ‘सिगलका बच्चा सुरुमा उड्ने बेला घरमा ठोक्किएर बगैँचामा खस्ने गरेका छन्,बचाउन माउ सिगलले आक्रामक व्यवहार देखाउने गरेका छन् ।’ हालै गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार बेलायतमा करिब ४४ प्रतिशत मानिस सिगल चरा दिन प्रतिदिन आक्रामक बन्दै गएकाले जोगिने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाएका छन् ।
के हो सिगल चरा ?
प्रायः सेतो रंगको यो जलीय चरालाई सामुद्रिक चराको रूपमा चिनिन्छ । हेरिंग र थोरै कालो पिठ्युँ भएको गुल गरी दुई प्रजातिका चरालाई सिगल भनिन्छ । यसको प्वाँख लगभग पाँच फिटसम्म फैलिएको हुन्छ । यसको तौल २.५ एलबी (१.१३ किलोग्राम) सम्म हुन्छ ।
यसको प्वाँख लामो र खुट्टा छोटो हुन्छ । विशेष रूपमा शीतल ठाउँ र समुद्री क्षेत्रमा पाइन्छ । चिसो मौसममा यो चरा झन्डै दुई हजार किमिसम्म यात्रा गर्न सक्छ । चराविद्हरूका अनुसार यो ४९ वर्षसम्म बाँच्न सक्छ । बेलायती नौसेनाले पहिलो पटक विश्वयुद्धका क्रममा सिगललाई जासुसका रूपमा प्रयोग गरेको थियो ।
सिगल किन यति आक्रामक ?
मानिस वा सानो जनावरमाथि आक्रमण गर्नका लागि सिगललाई उत्प्रेरित गर्ने कारणचाहिँ समुद्री तटमा बढ्दो कोलाहल, खाद्य फोहोर, सहर विस्तार र मानिसको भीडभाडलगायत हुन् । यस्तो अवस्थाकै कारण सिगलले मानिस वा घरपालुवा जनावरमाथि झम्टिने गरेको हो ।
बेलायतमा समुद्री तटमा सिगलले दुःख दिनुलाई एउटा चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । यसका कारण समुद्री किनारमा पुग्ने मानिस र पशु मालिकहरू डराउने गरेका छन् । उसको अत्यन्तै तिखो चुच्चो, पन्जा र शक्तिशाली प्वाँखको अर्थ उसले साना जनावर र पूरै कन्टेनरलाई समेत झम्टेर उड्न सक्ने क्षमता राख्नु हो । इंग्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डका स्थानीय सरकारले सिगल चरालाई खानेकुरा दिनबाट रोक्न र उसलाई गुँड बनाउन तथा प्रजनन्का लागि प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त वातावरण कायम गर्ने उद्देश्यले कानुन नै बनाइसकेको छ ।
‘रोयल सोसाइटी फर द प्रोटेक्सन अफ बर्डस्’ ले पछिल्ला समय सिगल चरा जोडले चिच्चाउनु र झम्टनुको प्रमुख कारण ध्वनि प्रदूषणलाई मानेको छ । अहिले प्रायः छतका सामग्रीहरूमा बनाएको गुँडमा आफ्नो खाद्यसामग्री लैजाने गर्छन् । मानिसले रोक्ने प्रयास गर्दा सिगल आक्रामक बन्ने गरेको हो । प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०८:२०
उपप्रमुखलाई पनि गाडी !
गण्डकी — गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहका उपप्रमुखले पनि सवारीसाधन सुविधा पाउने भएका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को असार २५ को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ संशोधनपछिमन्त्रिपरिषदको निर्णय लागू हुन्छ । ऐन संशोधनका लागि सरकारले प्रदेशसभामा लैजाने तयारी गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहका प्रमुखले मात्र गाडी चढ्दै आएका थिए ।
ऐनको दफा ४ (१) मा स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षलाई स्थानीय तहले सवारीसाधन तथा इन्धन उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ । त्यसलाई संशोधन गरी उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष थप्ने निर्णय भएको गण्डकी सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । ‘उपप्रमुख वा उपाध्यक्षका लागि स्थानीय तहले अर्को सवारीसाधन व्यवस्था गर्न सक्छन् । नभए प्रमुखले चढ्ने गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रमुखलाई मात्र गाडी किन भन्ने गुनासो आएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।’
यो निर्णयसँगै प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमा ८५ सवारीसाधन थपिनेछन् । इन्धन, चालक र मर्मत खर्च पनि हवात्तै बढ्नेछ । ऐनमा व्यवस्था नभए पनि पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले भने यसअघि नै गाडी चढ्दै आएकी थिइन् ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले बैठक भत्ता र यातायात खर्च पनि पाउने गरी नियम बनाउँदै छ । कार्यपालिका सदस्यले अब प्रतिबैठक एक हजार रुपैयाँ भत्ता र ७५० रुपैयाँ यातायात खर्च पाउनेछन् ।
सरकारले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यको सुविधा बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । कार्यपालिका सदस्यले वडाध्यक्ष सरह र गाउँ तथा नगरसभा सदस्यले वडाध्यक्षको आधा सेवासुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । दोहोरो सुविधा लिन पाउने/नपाउने छलफलकै क्रममा रहेका बेला गण्डकी सरकारले जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाएको हो ।
नागरिक अगुवा आनन्दराज मुल्मीले सुविधाकै लागि मरिहत्ते गर्दा जनतामाझ नकारात्मक सन्देश जाने बताए ।
प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०८:१५